चाणक्यका अनुसार सफलता र उन्नतिका लागि यसरी लिनुपर्छ निर्णय
२०७७ असोज २८ बुधबार, काठमाडौं । चाणक्य नीतिको दशौ अध्यायको १५ औँ श्लोक आजको समयमा सबैका लागि फाइदाजनक छ । चाणक्य नीतिको यस श्लोकमा सफलता र उन्नतिमा आउने अवरोधका बारेमा बताइएको छ । ... बाँकी अंश»
२०७७ असोज २८ बुधबार, सौरमान अनुसार आज अधिक आश्विनकृष्णको द्धादशी तिथि रहनेछ । आज मघा पूर्वाफाल्गुनी, विष्कुम्भादि योगमा शुक्ल, करणमा गर, आनन्दादि योगमा स्थिर रहनेछ । सूर्य कन्या राशिमा, चन्द्रमा सिंह राशिमा रहनेछ । आज दिनमान २८ घटि ४५ पलाको रहनेछ । ... बाँकी अंश»
२०७७ असोज २७ मंगलबार, महात्मा गौतम बुद्धको समयको एक घटना हो । त्यो समय मृत्युपछि आत्मालाई स्वर्गमा प्रवेश गराउनको लागि पण्डित केहि विशेष कर्म काण्ड गर्ने गर्दथे। त्यसको बदलामा पण्डितहरु मनग्य दान-दक्षिणा लिने गर्थे। मानिसहरु आफ्नो मृतक परिवारजनकहरु स्वर्गमा स्थान दिलाउनको लागि पण्डिहरुको सबै कुरा मन्ने गर्दथे । ... बाँकी अंश»
दुईपटक रोगबेला भएको यस्तो हुनेछ मंगलबारको दिन
२०७७ असोज २७ मंगलबार, सौरमान अनुसार आज अधिक आश्विनकृष्णको एकादशी तिथि रहनेछ । आज मघा नक्षत्र, विष्कुम्भादि योगमा शुक्ल, करणमा कौलव आनन्दादि योगमा काल रहनेछ । ... बाँकी अंश»
कोईला बनाएर बेच्ने दाउरेले थाहा पाए चन्दनको मोल
२०७७ असोज २६ सोमबार, काठमाडौैं । एउटा गाउँमा एकदमै गरीब दाउरे बस्थे। एक दिन राजा शिकार खेल्न जादा जंगलमा बाटो बिर्सीए अनि राति ती दाउरेको झुपडीमा पुगे। दाउरेले आफ्नो झुपडीमा राजालाई आश्रय दिए, खाना-पानी पनि दिए। ... बाँकी अंश»
सत्य र न्यायको पक्षमा कलम चलाउने मेरो पिता बलराम बानियाँलाई चाहि न्याय चाहिदैन?
२०७७ असोज २६ सोमबार, मेरो नाम सुस्मिता बानियाँ हो। म स्वर्गीय पत्रकार बलराम बानियाँकी छोरी हुँ। बलराम बानियाँ, जसले तीन दशक भन्दा लामो समयसम्म राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा आबद्ध रहेर सत्य, सुशासन र न्यायको पक्षमा कलम चलाउनुभयो। उनै पत्रकार, जसले आफ्नो ज्यानको माया नगरिकन, कुनै प्रकारको प्रलोभनमा नपरि, कुशल पत्रकारिताको धर्मबाट विचलित नभई, अहोरात्र खटेर सही सत्य सूचना आम नेपालीहरुमाझ प्रस्तुत गर्नुभयो । उही पत्रकार, जस्को समाचारले न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका समेतलाई आफ्नो कर्तव्यबाट विचलित नहुन सधैं प्रेरित गर्दथ्यो। जसले कैयौं भ्रष्टाचारी र अपराधीहरुको सञ्जाललाई आफ्नो कलमको माध्यमबाट तोड्न सफल हुनुभएको थियो। उहाँको समाचारका कारण कैयौं आपराधिक क्रियाकलापहरु हुनबाट रोकिएका थिए। ... बाँकी अंश»
दुईपटक अमृतबेला भएको यस्तो हुनेछ सोमबारको दिन
२०७७ असोज २६ सोमबार, सौरमान अनुसार आज अधिक आश्विनकृष्णको दशमी तिथि रहनेछ । आज अश्लेषा नक्षत्र, विष्कुम्भादि योगमा साध्य, करणमा बब आनन्दादि योगमा सौम्य रहनेछ । ... बाँकी अंश»
२०७७ असोज २५ आइतबार, महात्मा गान्धीले सार्वजनिक रुपमा आफु हिन्दूस्तानमा जन्मेको तर साउथ अफ्रिकामा बनेको भनेका छन्। गान्धी १८ बर्षको कलिलो उमेरमा लण्डन पुगे । अध्ययन सकिएपछी २१ बर्ष साउथ अफ्रिकामा बिताए । त्यो बेला मान्छेको औसत उमेर ४५ देखी ५० थियो । उनी ४५ को उमेरमा भारत फर्किए । तत्कालिन समयको औसत उमेरलाई आधार मान्ने हो भन्ने उनी जीवनको उत्तरार्धमा हिन्दूस्तान फर्किएका हुन् । आज गान्धीलाई एउटा दर्शनको रुपमा लिने गरिन्छ । गान्धीको दर्शनबाट केवल भारत मात्रै हैन सम्पूर्ण विश्व प्रभावित छ । २१ बर्ष साउथ अफ्रिका बसेका गान्धीसँग त्यहाका तीता मीठा सम्झनाहरु हुने नै भए । तर पनि उनले साउथ अफ्रिकालाई आफ्नो कर्मभुमी र आफुलाई गान्धीका रुपमा चिनाएको ठाउँका रुपमा लिन्छन् । ... बाँकी अंश»
राजा दशरथको एक गल्ती जसबाट पाए मृत्यु
२०७७ असोज २५ आइतबार, रामायणमा श्रीरामको वनवासपछि अयोध्याका राजा दशरथलाई असल र खराब कामहरूको फलबाटै भाग्य बन्छ भन्ने कुराको महसुस भयो। भाग्य कर्मबाटै बन्छ । हामी जस्तो काम गर्छौ त्यस्तै हाम्रो भाग्यको निर्माण हुन्छ । हामी आफ्नो कर्ममा टिकाका छौ । ... बाँकी अंश»
पञ्चाङ्गअनुसार यस्तो हुनेछ आइतबारको दिन
२०७७ असोज २५ आइतबार, सौरमान अनुसार आज अधिक आश्विनकृष्णको नवमी तिथि रहनेछ । आज तिष्य नक्षत्र, विष्कुम्भादि योगमा सिद्धि, करणमा वणिज आनन्दादि योगमा श्रीवत्स रहनेछ । ... बाँकी अंश»
शनिबार शनिदेवको पूजा, दुईपटक छ कालबेला
२०७७ असोज २४ शनिबार, सौरमान अनुसार आज अधिक आश्विनकृष्णको नवमी तिथि रहनेछ । आज आद्रा नक्षत्र, विष्कुम्भादि योगमा परिध, करणमा बालब आनन्दादि योगमा छत्र रहनेछ । सूर्य कन्या राशिमा, चन्द्रमा कर्कट राशिमा रहनेछ । ... बाँकी अंश»
२०७७ असोज २३ शुक्रबार, मारीचको कुरा सुनेर रावण क्रोधित हुदै आफ्नै बल र शक्तिको घमण्ड गर्न थाले । तब मारीचले बुझे कि सीता हरण गर्नको लागि रावणको मद्दत गर्नुमै भलाई छ । रावणको हातबाट मारिनुभन्दा श्रीरामको हातबाट मर्नु ठिक हुनेछ र जसबाट आफ्‍नो उद्धार हुनेछ । ... बाँकी अंश»
चन्द्रमा मिथुन राशिमा भएको यस्तो हुनेछ शुक्रबारको दिन
२०७७ असोज २३ शुक्रबार, सौरमान अनुसार आज अधिक आश्विनकृष्णको अष्टमी तिथि रहनेछ । आज आद्रा नक्षत्र, विष्कुम्भादि योगमा परिध, करणमा बालब आनन्दादि योगमा पद्य रहनेछ । सूर्य कन्या राशिमा, चन्द्रमा मिथुन राशिमा रहनेछ । आज दिनमान २९ घटि ५ पलाको रहनेछ । ... बाँकी अंश»
परमार्थका लागि क्रोध र घमण्ड बाधक
२०७७ असोज २२ बिहिबार, एकवर्ष पछि जिज्ञाशु आए । महात्माले पुनः नुहाएर आऊ भने र बढार्ने स्त्रीलाई यस पटक नुहाएर आउंदा बढारेको पात पतिगंरको टोकरी उसको टाउकोबाटै खनाइ दिनु भनेर अर्‍हाए । जिज्ञाशु नुहाएर आएपछि उनले त्यसै गरिन् तर जिज्ञाशु उनको पाउमा परेर भने, “आमा, तिमीबाट मैले आफ्नो जीवन सुधार्ने मौका पाएं” भनेर पाउमा परे । ... बाँकी अंश»
लकडाउन लाग्न लाग्या हो ?
२०७७ असोज २२ बिहिबार, दुई साताअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले नेपालमा सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या २५ हजार नाघे पुनः लकडाउन गर्ने बताएका थिए । असोज २१ गते बुधबार अपरान्ह उनी आफैले सक्रिय संक्रमितको संख्या २५ हजार ७ पुगेको बताए । ... बाँकी अंश»
मन्त्रिमण्डलमा गौतम र पौडेलको प्रतिक्षा, अन्योल के मा ?
२०७७ असोज २२ बिहिबार, अबको मन्त्रिमण्डलमा गौतम र पौडेल अटाएनन् भने अर्को आश्चर्य हुनेछ । जे भए पनि त्यो पार्टीको आन्तरिक मामिला हो । तर अहिलेको चरम संकटका बेलामा समेत सरकारले मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिएर पूर्णरुपमा क्रियाशिल नगराउनु भने दुःखद पक्ष हो । ... बाँकी अंश»
दुईपटक शुभबेला भएको यस्तो हुनेछ बिहीबारको दिन
२०७७ असोज २२ बिहिबार, सौरमान अनुसार आज अधिक आश्विनकृष्णको सप्तमी तिथि रहनेछ । आज मृगशिरा नक्षत्र, विष्कुम्भादि योगमा वरियान, करणमा भद्रा आनन्दादि योगमा मृत्यु रहनेछ । सूर्य कन्या राशिमा, चन्द्रमा मिथुन राशिमा रहनेछ । आज दिनमान २९ घटि ९ पलाको रहनेछ । ... बाँकी अंश»
चाणक्यका अनुसार एक चीज बशमा राखे पाइन्छ दुःखबाट पार
२०७७ असोज २१ बुधबार, आचार्य चाणक्य चंचलताबाट दुःखको चर्चा गर्दै भन्छन्, 'जसको चित्त स्थिर हुदैन, सो व्यक्तिलाई न त मानिसहरु बिच सुख मिल्छ न त वनमा नै । मानिसहरुबीचमा रहदा उसभित्र जलन हुन्छ तथा वनमा एकलोपनले जलाउछ।' ... बाँकी अंश»
डा गोविन्द केसीसँग कुन परीक्षण ?
२०७७ असोज २१ बुधबार, अन्याय सहँदैनन् । व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्दैनन् । मानवजातिको रक्षा नै उनको एकमात्र ध्येय छ । वरिष्ठ चिकित्सक भएर पनि उनले कुनै दलगत पुच्छर समातेनन् । उनलाई कतै नियुक्ति वा कुनै पदलोलुपता भएन । चिकित्सक भएको नाताले उनले सारा नेपालीले समान व्यवहारमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्नेमा अडिग छन् । ... बाँकी अंश»
दुई पटक लाभबेला भएको यस्तो हुनेछ बुधबारको दिन
२०७७ असोज २१ बुधबार, आज रोहिणी नक्षत्र, विष्कुम्भादि योगमा व्यतिपात, करणमा गर आनन्दादि योगमा शुभ रहनेछ । सूर्य कन्या राशिमा, चन्द्रमा वृष राशिमा रहनेछ । आज दिनमान २९ घटि १३ पलाको रहनेछ । ... बाँकी अंश»